Arabia Saodita : Voasivana ny kaonty Twitter roa an’ireo mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita : Voasivana ny kaonty Twitter roa an’ireo mpikatroka
Nandika (fr) i Claire Ulrich
Voadika ny 25 Janoary 2019 4:21 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanakana ny fidirana tamin’ny Aterineto tamin’ny kaonty Twitter anankiroa ny Vaomieran’ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisana ( CITC) ao Arabia Saodita dia ny an’ilay bilaogera @Mashi97 sy ny an’ilay mpikatroka @abualkhair . Niseho ity bahana amin’ny kaonty Twitter ity noho ny fandraisany anjara tamin’ny hetsi-panoherana vokatry ny fifidianana filohampirenena tao Iran.
Nilaza tamin’ny sampan-draharahan’ny AFP ilay bilaogera Khaled al- Nasser fa mety nanelingelina ny mpanivana ny hafatra nalefany izay ahitana rohy mankany amin’ny tranonkala hafa tahaka ny tatitra nataon’ny fikambanana Human Rights Watch momba an’i Arabia Saodita. Ilay mpikatroka Waleed Abu al-Khair kosa dia namoaka ny rohy mankany amin’ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona [ ao Palestina] tamin’ny hafany tao amin’ny Twitter.
Afaka nanome fanavaozam-baovao tao amin’ny kaontiny Twitter i Khaled al-Nasser sy i Abu al-Khair na dia teo aza ny fibahanana, satria tsy voatery idirana amin’ny aterineto ny fidirana amin’ny kaonty Twitter raha handefa hafatra vaovao. Ny mahatsikaiky amin’ity toe-javatra ity dia : manana kaonty Twitter izay nisokatra ny volana Jona (2009) ny Vaomieran’ny NICT ao Arabia Saodita. Manana mpanjohy miisa 81 tamin’ny fotoana nanoratana ny kaontin’ny CITC, saingy tsy manjohy na iza na iza.
* Sary natolotr'i Kharejaljasad
Tantaran'ny Arabia Saodita farany
25 Jolay 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
27 Avrily 2021Fifandraisana iraisam-pirenena
Arabia Saodita: Tsy nahazo solika maimaimpoana i Puff Daddy
19 Febroary 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Votsotra i Loujain al-Hathloul, ilay Saodiàna vavy mpikatroka, ary nibitsika
22 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy